Guddoomiyihii degmada X/Jajab Axmed Sheekh Maxamuud oo u geeriyooday qarax miino oo lala beegsaday. – Radio Daljir
Guddoomiyihii degmada X/Jajab Axmed Sheekh Maxamuud oo u geeriyooday qarax miino oo lala beegsaday.
Muqdisho, Mar 27 – Guddoomiyihii degmada Xamar-Jajab ee gobolka Banaadir Axmed Sheekh Maxamuud \_’Qoorleex\_’ ayaa u geeriyooday qarax miino oo saakay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen isaga iyo mas\_’uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir, kuwaasi oo xilliga miinada lala eegtay marayey gudaha degmada Xamar-Jajab.
Guddoomiyaha ayaa sida la tilmaamay ku geeriyooday goobtii qaraxa lagula beegsaday, waxaana sidoo kale halkaasi ku dhaawacmay mas\_’uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir una qaabilsanaa xagga amniga, waxaana wararku ay intaasku ku darayaan dhammaanba gaarigii ay wateen in uu burburay taasi oo tusaale u ah baaxadda qaraxaasi iyo inta uu le\_’ekaa.
Sikastaba ha ahaateen ma\_’ahan markii ugu horraysay oo mas\_’uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ama midka dawladda federaalka lagu weeraro gudaha magaalada Muqdisho, waxaana maalmahaan danbe sii kordhayey weerarada hubaysan iyo qaraxyada kala beegsanayo madaxda dawladda.